Tontolon’ny bilaogy Alarobia ao Azia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2018 11:35 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Jiona 2005)
Azia Afovoany sy ny Kaokazy
Ny bilaogy amin'ny teny Farsi Shared Pains (nahazo ny Loka RSF Freedom Blog 2005) manana lahatsoratra amin'ny teny Anglisy momba ny fahalalaham-pitenenana ao Afghanistan (pao-tsatroka ho an'ny Afghan Lord).
Registan miresaka tafatafa niarahana tamin'ny mpitarika ny firaisamben'ny mpanohitra ao Uzbekistan. Tamin'ny andro faha-40 ny fisaonana taorian'ny famoretana an'i Andijan, manana teny masiaka ho an'ny jamba ao Rosia i Nathan.
Blogrel miresaka momba ny herin'i Amerika amin'ny fametrahana ny demaokrasia ao Kaokazy.
Webbed Feet manana lisitra lehibe misy ireo olona mibilaogy momba an'i Kambodza.
Satria mitsidika an'i Etazonia ny praiminisitra ao Vietnam, mitatitra ny bilaogy vaovaoVietnamjournalism, tantanina mpanao gazety Vietnamiana fa ny filoha Vietnnamiana dia maniry ny mpanao gazety mba hanampy “hampahery ny olom-pirenena handrava ny zava-noforonin'ny fahavalo.”
Mack Zulkifli ao amin'ny Brandmalaysia miresaka momba ny fihetsiky ny media tamin'ilay bilaogera Singapaoreana izay nampiseho ny ampahany betsaka taminy tao amin'ny bilaoginy… ary ny olana lehibe momba ny fibilaogina ho fomba fiaina.
Mpahay toekarena/mpamakafaka Paul Krugman nitsidika an'i Bangkok, ary Sarasonteh manoratra ny fiantraikany.
Ao Shina, voamarina ankehitriny fa nosakanana ny bilaogy Typepad. Asiapundit nanomboka fanentanana mba hanala-baraka ireo orinasa manana ny teknolojia nahafahan'ny governemanta Shinoa hanao izany. (Misy ny tohan-kevitra lehibe mandeha momba izany ao amin'ny takelaka fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaogiko.)
Mandritra izany, naresaka be tao amin'ny tontolon'ny bilaogy amin'ny teny Anglisy ny tetikasa Shinoa adopt-a-blog.
Chinadigitaltimes miresaka momba ny lahatsoratra tao amin'ny Straits Times ao Singapaoro: SHINA: Mamely ny tranonkalan'ny orinasa miezaka mifehy ny fampiasana ny aterineto ireo mpijirika. Mino fa fantatsika farafaharatsiny ny toerana misy ireo mpijirika ao Shina mikasika ny olana momba ny sivana …
ESWN mamaritra ny fomba hanafenana ny vaovao tsy ho tonga amin'ny gazety ao Shina.
Reporters Without Borders mampiantrano bilaogy vaovao avy ao Nepal, Nepal Info (amin'ny teny Nepaley).
Ao Bangladesh, Futurebanglanetwork maneso ny fahazotoan'ny Banky Iraisampirenena amin'ny resaka fandresehan-dahatra anoherana ny hetra amin'ny karatra SIM.
Chiens Sans Frontieres mitondra rohy amintsika mankany amin'ny rap Gujarati.
Ao India, mikasa hanao fihaonan'ny bilaogy amin'ny Alahady ireo bilaogera ao Mumbai. Raha ao an-tanàna ianao, ataovy izay ahatongavana amin'izany.
Ma-Schamba ao Mozambique miandrandra mafy ny fampiratiana zava-kanto momba ny ankehitirny Mozambikana [Portiogey] atsy ho atsy. (eo ankavia ny afisy momba ny fampiratiana.)
Sokwanele manahy fa miova ho zanatany Shinoa i Zimbaboe.
Vilho's World manana hevitra momba ny olan'ny mangaraharaha ao Namibia.
Ao amin'ny Lebanese Political Journal, “Cedar-Guardian” manana hevitra sasany mikasika ny ho avy ara-politika taorian'ny fifidianana ao Libanona, sy “Mombamomba an'i Libanona“ niala tamin'ny famonoana ara-politika. (Tsindrio eo amin'ny anaran'izy ireo raha handre ny fandraketam-peo tamin'ireo bilaogera roa tao Beirota.)
Brooding Persian manazava ny antony tsy hifidianany amin'ny fifidianana fihodinana faharoa ao Iran amin'ny Zoma.
Under Underground kosa hifidy saingy tsy te-hiresaka momba izany.
Ao Ejypta, Manal sy Alaa mamaritra ny fomba nikarakaran'izy ireo ny fihetsiketsehana sy ny fomba nandraisan'ny bilaogy anjara tamin'ny ampahany.
Nir Ofir ao amin'ny Spark Armada te-hanomboka fombafomba amin'ny Andron'ny Bilaogy Manerantany amin'ny 31 Aogositra. Nahoana no izany daty izany? Satria mihevitra izy fa ny karazana daty 3108 dia somary mitovy amin'ny teny hoe “bilaogy” raha soratana amin'ny fomba hafa… Ny heviny dia: “amin'io andro io, handefa lahatsoratra toro-hevitra amin'ny bilaogy vaovao 5 ny bilaogera tsirairay (amin'ny fotoana iray). Amin'izany andro izany, ireo mpisera tranonkala Bilaogy rehetra dia hahita ny tenan'izy ireo hiatsambotra sy hahita ireo bilaogy vaovao tsy fantatra.” (Namorona ny sary eo ankavanana mihitsy aza izy.)
Bonjour L'Estonie mamaritra ny fivavahana teratany ao Estonia.
Finland for Thought manana ankamantatra fohy momba ny mpitarika ny fireneny…
Pestiside kiriko amin'ny ady an-dalambe ao Hongria.
Ho avy tsy ho ela. Jereo ity lahatsoratra ity avy eo mikasika ny rohin'i Latam androany El Oso.